Chii The Top 8 Cook In Italy | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Italia > Chii The Top 8 Cook In Italy
Iyo nzvimbo nani kunakidzwa Pizza kupfuura nyika kuti tega nayo, rudyi? vokuItaly rudo, rudo, rudo ichi chinonaka tudyo-akatendeuka-kudya! Ndosaka cook muItaly vari ikava yakachena muchimiro ounyanzvi, uye vari pakupedzisira UNESCO-mvumo!
Kungomberereka kumativi Italy, uchawana pizzerias akazarurwa muzana remakore rechi18 asiwo vatsva, ane zvachose yakachena vataure kubikira. Kune mazana akasiyana hwaro nzira, toppings, hukuru, uye siyana. nyonyova, haugoni tisangosiya kuva Pizza kanenge kamwe panguva kushanya kwenyu ichi yakanaka Mediterranean nyika… zvakanaka? Kugona. Kunyange kana iwe usiri pizza feni, Italian chef achawana kuti kushandura pfungwa dzako
Zvatataura vachakupai pamusoro-notch restaurants Roma, Milan, Florence, Naples, uye Verona. Heano pamusoro 8 cook kuItaly.
CHERECHEDZA: Musakanganwa kuti Download ose nakisa kubatsira Apps okufambisa usati watanga rwendo yako.
Da Vittorio muna Trastevere, Rome: Pizza ane zvarisingazivi monyorora
Panguva Sarudza ichi cook In Italy, unogona kutora chikamu zvakabudiswa ari "trẻ Colori Pizza." Vatatu Spicy dzakasiyana zvinhu zvinouyisa dzvuku, chena uye girini Pizza, kufanana ChiItalian mureza. Musaedza kurega Jalapeno pepper, Spicy Sicilian soseji, uye tangy chena chizi kupisa muromo wako. Kana wapedza pizza rose 10 maminitsi zvichidzika iwe kuhwina mubairo. Kuwedzera mutemo uyu, nemiwo hamugoni kunwa zvinopfuura 16 Ounces mvura kana doro. The weNobel anowana kudya ake akasununguka, t-hembe uye pikicha takaisa parusvingo Mukurumbira. uye, chii chinoitika kana mukasandizivisa kuiita? Unogona edzai zvakare, saka yeuka nzvimbo ino kana iwe akaenderei Roma.
Pizzeria Da Attilio, Naples: The True Kumwe Pizza
Ngatitange nyaya yedu pamusoro cook muItaly nevamwe zvinokosha. Many vokuItaly funga Margherita chete kuti Pizza mhando kwechokwadi. Mishomanana manyoro uye mukaravhani zvinhu zvinofanira kuita kuti zvinoshamisa dhishi, zvinenge. Uye kana totaura Da Attilio raMwari Margherita, vane kodzero. Homemade mukanyiwa, kutsva domatisi muto, namafuta, uye yakachena mozzarella zvose zvaunoda. Kana muromo wako Unodiridza sezvo uchiverenga izvi, Da Attilio ndiyo nzvimbo. Iva nechokwadi kuti aone kubva apo kusora guta Naples.
munuhwi, Verona: Unyanzvi Kuita Doe
Sapore inzvimbo unogona kuwana broadest kuwanda yepamusoro mukanyiwa chete resitorendi rimwe. Renato Bosco, ari neshasha pamusoro Sarudza iyi cook In Italy nzvimbo, anonzi imwe Italy yepamwoyo chingwa inoitwa nyanzvi. Sezvo unogona kuwana zvakawanda dzakasiyana-siyana cook pano, zvingava zvikuru kukumbira kuti degustation Muterere. Zvinonzi Dzakamukurudzirawo kubvunza pamusoro zvakasiyana vakaisvoipa nzira usati kuita chisarudzo chokupedzisira. Vegans Kazhinji rudo Sapore kuti kupa sezvo ane zvakawanda cook kuti zvienderane dzavo zvaunofarira.
Milan kuna Verona Zvitima
Pizzeria Brandi, Naples: Pakati Best cook muItaly Sezvo rechi18 Century
Pizzeria Brandi ndiye anonzi anokonzera coining izwi Pizza Margherita. Vakatora zita iyi kukudza mambokadzi chete zita. Ehe saizvozvo, pizza pamwe chete pakugadzira asati, asi moniker ichi zvakaita iconic ari Pizza zvose. Pizzeria Brandi yakatanga kusvika 1870 kana kushanda pasi zita Pizzeria von Pietro. Tsika uye nyaya shure nzvimbo ino akaita akakurumbira pakati vokuItaly uye vashanyi. Ndokusaka vazhinji vachiri kuungana pano nenzara kuti bande mumwe mambokadzi ainzi anofarira.
Rimini para Naples Zvitima
Siena kuna Naples Zvitima
A ikakuruma zvinodhura nokuti pizza nzvimbo, asi ayo mukati uye nzvimbo kuita kupembedza chikuru bhiri. Kunyange zvakadaro, pizza iri richinaka wo. pizzeria uyu vaya vanofunga kunze bhokisi. Kupambadza zvinhu zvichaita zvikuomere kuedza chinhu chitsva uye anoshamisa, sezvinoita pizza pamwe maonde kana zvomugungwa. zvakare, mumwe degustation Muterere iri sarudzo huru pano, sezvo hazvisi nyore kusarudza chii kunonga. Mukuwedzera, kusiyana zvikuru nedzimwe cook muItaly, uyu munhu zvechokwadi nyore kugaya.
Il Trapizzino, Rome: Chinhu Little Different
Il Trapizzino ari kushamisika chaizvo chero Pizza anoda. Achisiyanisa vamwe cook muItaly, cook pano tarisa zvakawanda zvakafanana mativi sandwiches. Vamwe vavo stuffed cook. Inside izvi stuffed zvokuridza unogona kuwana zvinhu zvakafanana steamed huku, eggplant uye dzvuku octopus. Mukanyiwa chiedza chaizvo, izvo zvinoita kuti kudya zvidimbu zviviri kana zvitatu. This diki, nzvimbo unodziya pedyo Testaccio nguva dzose rakazara vanhu. Saka iwe nani kuita maawa kuchengetedza kanenge mashoma pachine.
Trieste kuRoma Zvitima
La Spezia kuRoma Zvitima
Uyu ndomumwe inozivikanwa cook MuItaly uye zviri muMilan. saka, usashamisika kana ukaona mutsetse vanhu vakamirira kunze chitoro. Cues kunogara chinhu Pizza AM. Sezvo havadi kuti uende kumwe, Varidzi ichakupa duku Pizza toaisa paunenge wakamirira. Unogona kuwana girazi Italian chena waini wo. Vane diki Muterere, pamwe chete 3 mhando Pizza. Hey, regai muchifunganya – vose anoshamisa, saka imi musingadi kunzwa sokuti uri kurasikirwa zvachose.
Trieste kuna Milan Zvitima
Perugia kuna Milan Zvitima
Symbiosis Organic Pizza, Florence: A Healthy Tora musi cook In Italy
Kana uri kutsvaka gluten pachena-cook In Italy, Symbiosis muna Organic Florence ndiye unofanira kurangarira zita. Panewo akawanda kueche mikana, asi kwose, Pizza ose Inonaka zvinoshamisa! Zvose yakaitwa kubva Organic pakugadzira, kuita izvi Pizza wedzeredzei vakagwinya pane vamwe. Mukanyiwa zvikuru gobvu, izvo zvingava pashure wose vanofarira. asi – vose vanoda vapfumi zvinodiwa izvo nezvimhingaidzo kuti mudye rose Pizza! Kana iwe usingagoni kuidya zvose, kurongedza chii asara uye ndiriponese nokuda mangwana. Zvichava vachiri kuravidza richinaka.
Saka ipapo iwe nayo. Izvi zvakanga sarudzo yedu pamusoro cook kuItaly. Saka kumaresitorendi zhinji kushanyira, uye vazhinji saka zvakasiyana siyana yokuravira! zvisinei, ava chete mazano. zvirokwazvo unogona kuwana zvakawanda dzimwe neinonaka pizzas kwakakomberedza Italy pachako. Kana uchida kubatsirwa kusarudza iyo nzira ndiyo yakanakisisa chevatariri kuItaly, kutishanyira panguva www.saveatrain.com. Tichava zvinopfuura kukubatsira! Rongedzai chitima yako rwendo pre-rwendo zvinokosha, tipei kudanwa, uye regai ushingi kutanga!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine batanidzo(www.saveatrain.com) kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/top-8-pizzas-italy/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / kuti / TR kana / ja uye mimwe mitauro.
#italypizza #Pizza #cook italia travelitaly